John Cena & Gacalisadiisii Nikki Bella Oo Kala Tegay Iyo Peter Kraus Oo Ka Faa’iidaystay | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
(11-12-2018) Xiddiga ciyaarta musaaricada WWE ee John Cena iyo gacalisadiisii Nikki Bella ayaa si ramsi ah u kala tegay kaddib sannado badan oo ay garoomada dhexdooda kusoo bandhigayeen jacaylka ay isku qabaan.
John Cena ayaa bishii April ee sannadkan ku dhawaaqay inay isku dhaceen xaaskiisii, waxaana uu tibaaxay xilligaas in ugu dambayn waxa usoo hadhayaa yahay xirfaddiisa musaaricada iyo guulaha uu ka gaadhayo, hase yeeshee inyar kaddib ayay soo baxeen warar sheegaya inay isku laabteen oo khilaafkooda xallisteen waxaana baraha bulshada ay Bella soo dhigtay sawir ay kula jirtay Cena muddo kooban ka hor.
Bella oo ay da’deedu tahay 35 jir kana mid ah haweenka ciyaara musaaricada, ayaa waxay mar kaliya qabsatay wararka lamaaneyaasha caanka ah kaddib markii ay dibedda keentay xidhiidh jacayl oo ay la samaysay Peter Kraus oo ka mid ah jileyaasha shirkadda Hollywood, sidoo kalena soo saara barnaamijiyo caan ah oo laga baahiyo telefishanada.
Bella ayaa la sheegay in ay Peter Kraus ula xidhiidhay si ay ula ficiltanto John Cena oo isaguna ka tirsan shirkadda Hollywood oo uu haddaba ku hawlan yahay filimo cusub oo uu jilayo.
Nikki Bella iyo Peter Kraus ayaa muuqaallo laga qaaday oo lagu baahiyey baraha bulshada waxay muujiyeen iyagoo kalidood ku maqan safarro dalxiis oo ay ku soo bandhigyaaan jacaylkiida bilowga ah.
Si kastaba ha ahaatee, Nikki Bella ayaa hore ugu eedaysay John Cena inuu khiyaamay, isla markaana aanu siinin waqtigii ay uga baahnayd.